Susa Izinkinga Zamazinyo | I-OptiSmile ™ Advanced Dentistry
Izimo Eziphuthumayo Zamazinyo
Impilo imatasa ngokwanele, futhi akufanele uchithe umzuzwana wayo kubuhlungu.
Ukopha izinsini ezimayelana nawe? Uzizwa unamahloni ngamazinyo alahlekile ne-halitosis? Ungabi namahloni noma ube namahloni, silapha ukuzosiza. Thola okuningi mayelana nalezi zinkinga zamazinyo ezivamile kanye nezixazululo zethu ezingenazinkinga, nezinhlungu. Ithimba lethu elinolwazi lodokotela bamazinyo baseKapa lihlome ngokuphelele futhi likulungele ukusiza.
Ingabe sekuphele iminyaka udokotela wamazinyo ebheka emlonyeni wakho? Ungabi namahloni, ukuvimbela kungcono kunokwelapha, kepha singakwenza kokubili uma kunesidingo futhi sibuyise ukuzethemba kwakho.
Isikhathi Nje Sokuvakashelwa
Unamazinyo anamabala noma aphuzi? Ngabe amazinyo akho asontekile futhi alwela isikhala? Masilungiselele ukumamatheka kwakho nge-orthodontics kanye namazinyo wezimonyo.
Insiza Yomhlaba Wonke Isiqinisekiso Sethu
Odokotela bethu bamazinyo eKapa bazibophezele ekwenzeni uzizwe ukhululekile, kuyilapho futhi sinikeza imiphumela esezingeni eliphakeme. Siyazethemba emsebenzini wethu ukuthi sizothatha indawo yokugcwaliswa noma okufakelwayo okungaphuma (ngoba siyazi ukuthi ngeke!) Konke okudingeka ukwenze ukuthembisa ukubanakekela.
Angikaze ngicabange ukuthi ukuya kudokotela wamazinyo kungaba "yinto ejabulisayo," futhi empeleni kujabulise! Kusukela ngocingo lwami lokuqala, insizakalo ibinenhlonipho, ifudumele futhi inobungane. Ngishaywe umoya ngokuphelele ubuchwepheshe - ikakhulukazi ukuthi ukwelashwa kwami ​​kwenziwa ngaphansi kwesibonakhulu, okungathatha izithombe. Amahedfoni - anikeza umculo engiwukhethile kwaba yinto evelele. Empeleni bekuziphumulele. Ubudokotela bamazinyo bekhulu lama-21 - phansi phansi amagama okuqala kumabheji egama nokumaketha kwezokuxhumana. Ngiyabonga Clifford, Akhona noJuliet. Ngizobuya nakanjani!
Wonke umuntu ovela eReception, abasizi, uDkt Clifford Yudelman kanye nozakwabo uDkt Harris Smeyatski babehlala ngendlela eyisimanga futhi benobungani ngenkathi benobungcweti. Lezi zinsiza sezineminyaka yobudala besikhala futhi zihlanzekile, bengibheka isigamu sesikhathi futhi ngikwazi ukukhululeka ngazi ukuthi ngisezandleni ezinhle ngaphandle kokunakekelwa emhlabeni njengoba izindaba zami zamazinyo zazinakekelwa. Wenze kahle OptiSmile !! Ngizobuya…
Ujabule ngomsebenzi wethu?
Sicela usitshele ngakho ngokushiya isibuyekezo.
Ukusuka Izwi Lomlomo Blog
Mask Off – Party On Celebrating in style, with our patients and partners at OptiSmile SmileView App Launch View this post on Instagram A post
Konke Odinga Ukukwazi Nge-Invisalign Clear Aligners eKapa￼
Konke Odinga Ukukwazi Nge-Invisalign Clear Aligners eKapa Ingabe ukhathazekile ngamazinyo akho agwegwile nangahambi kahle athinta ukumamatheka kwakho? Ingabe
23 Ephreli 2022
Ukuxubha nokuFlasha: Kungakanani Okuseqile?
Ukuxubha nokuvungula kubalulekile ukugcina amazinyo nezinsini kunempilo, kodwa kungenzeka yini ukweqisa le mikhuba emibili? Okubalulekile okuthathayo: - Ukuxubha ngobudlova
3 Ephreli 2022
Udokotela Wamazinyo Wezimonyo
Ukulahlekelwa Izinyo Kuyisivumelwano Esikhulu
Hhayi nje ngenxa yegebe elisishiya ngemuva, kodwa nangenxa yendlela umlomo wakho, amazinyo, imihlathi nobuso obuzonyakaza ngayo ukuze kungene.